Somalia: Xaaladda Reer Muqdisho Iyo Farmaajo – Sir Ma Qabe Saabaa Biyo U Celsha.!! - Wargane News
Home Somali News Somalia: Xaaladda Reer Muqdisho Iyo Farmaajo – Sir Ma Qabe Saabaa Biyo...
Cinwaankaan wuxuu xambaarsan yahay xikmad aad u qota dheer oo qeexeysa qofka daacada ah inuu mar kasta iyo si walba u guuleysan karo, dhibaato kasta uu maro. Maanta Soomaaliya waxay mareysaa marxalad aad khatar u ah oo dadka dalka taladiisa haaya aysan dareenesaneyn tubta ay ku socdaan iyo meesha ay geyneyso.
Waxaa jira xikmad Talyaani ah oo dheheysa “dimmi con chi sei ti diro’ quallo che sei”..Soomaalina waxay tiara “ninkaad sirtiisa bixi weyso saaxibkiisaa la dayaa”. Madaxda manta adduunka hogaanka u heysa waxaa badankooda la taliya dadka mujtamaca ugu liita oo sanka laga wada heysto. Bal fiiri Mareykanka inta Madaxweyne Trump talada ka qaato waa kuwa bulshada wax magac ah ama martabad sharaf uga jirin, sida Bolton, M/weyne ku xigeenka Mike Pence iyo qaar kale oo aad loo dhaleeceeyo marki ay afka kala qaadaan ama ay tallaabo qaadaan.
M/weyne Farmaajo inta u dooda ee la dhacsan xakunkiisa waa kuwa mujtamaca aan wax qiimo ah ku lahayn, waayoo hab-dhaqankooda ayaa aad u liita, waana dad aan xakumin waxa afkooda ka soo baxaya. Waxaa jirta xikmad Carabi ah oo dheheysa CAAQILKA CARRABKIISA WUXUU KA DAMBEEYAA CAQLIGIISA DABAALKANA CAQLIGIISA WUXUU KA DAMBEEYAA CARRABKIISA. Carrabkiisa woxow soo gudbiyaa waxaan caqliga ka soo bixin..waxa ka soo fulaa waa wax aan laga fiirsan
Wax ka dhacaya Xamar haddii inyar laga xuso waxaad arkeysaa inay tahay meesha kaliya ay dowladdu ka taliso, waxaana tusaale u ah in Ceel- Macaan ee xudunta Xamar ah ay sheeganeyso Hirshabeelle, xaafadda Wadajirna ay ka tirsan tahay Koofu-Galbeed. M/weyne Farmaajo iyo R/W Kheyre aysan weligood ka hadlin xuduudaha gobolka Banaadir oo ah mid la kala boobaayo si loo wiiqo hamiga dadka u
dhashay gobolkaan. DALKAAN DADKLI LAHAA AAWAY!!! Waa maqaal horey u soo baxay.
Dhibaatada heysata dadka Banaadir danahiisa u dooda waxay ka wehsadeen inaysan marna qaadi Karin tallaabo iyo go’aan ay ku soo ceshadaan xuquuqdaa gobolkaan oo ah meesha kaliya ay dowladdu masaruufka ka hesho, dadkiina lagu bahdilay, iaydoon wax dan u ah marna loo heyn.
Tusaalooyin gaaban haaddaan soo qaadanno waxaad arkeysaa in diktatoorada ka taliya caalamka sida SIISSII oo Masar ah, XAFTAR oo Liibiya dubanaaya ay ku doodaan inay la dagaalamayaan ARGAGIXISO…annagana xildh. IBBI, Wasiir GOODAX, siyaasi SALAAD JEELLE waxay ku qaraabtaan magaca in xildhibaanada ay u badan yihiin SHABAAB. Dhallinyarada Bajaajka sameystayna ay badankoodu u adeegaan Shabaab.
Intaa waxaa ka khatarsan in M/W Farmaajo intii uu raadi lahaa xal iyo hab-dhaqan xikmad iyo caqli ku fadhiya uu adegsanaayo AFMIINSHAAR uu xoogaa fara-qabsi la siiyo si loo dejiyo dhibaatada ka dhalatay fashalka hesyta dowladda ay hogaamiyaan labadaas qofood.
Magaalada Muqdisho ma jirto cid ku noolaan karta waana dhibaatada ay abuureen falalka gurracan iyo tala-xumada heysata madaxda dalka oon weli dareemin in tala farahooda ka baxday, meel ay ka taliyaana ay ka jirto Villa Somaliya oo kaliya. Waxaa hubaal ah ina Madaxda dalka ay sir u qarsan tahay taasoo ku saleysan in la wiiqo hamiga Banaadir si uusan weligii u hanan himilada uu xaqa u leeyahay gobolkaan.
Saaxibka M/W Farmaajo waa Aby Axmad waana la ogaadaay sirta uu maleegaayo ee Ilaahow Rabbiyow sharteeda naga xijaab…AAMIIN.
Afeef: Aragtida qoraalkan waxa ay ku gaar tahay qofka ku saxiixan, kamana tarjumeyso tan Caasimada Online. Caasimada Online, waa mareeg u furan qof kasta inuu ku gudbiyo ra’yigiisa saliimka ah. Kusoo dir